Nanomboka omaly tetsy amin’ny Hotely Solimotel izany ary nivoitra tao fa tena ilaina ary takiana mihitsy ny voka-pikarohana mahakasika ny seha-pihariana jono sy ny harena anaty rano handraisana fanapahan-kevitra amin’ny fitantanana. Miaraka amin’ireo voka-pikarohana ireo no ahafahana mandrindra amin’ny ankapobeny ny fanapahan-kevitra raisina hanatsarana ny fitantanana maharitra sy ho lovain-jafy izay hita mbola lesoka eto Madagasikara. Hisy ny fametrahana rafitra fitantanana sy ny fijerena ny laharam-pahamehana amin’ireo voka-pikarohana, indrindra ny fitadiavana famatsiam-bola hifehezana ny fitantanana maharitra. Ankoatr’izay dia ilaina ny fiaraha-miasa amin’ireo mpisehatra sy mpiara-miombon’antoka rehetra. Anisan’ny asa fikarohana hita tao, ohatra, ny mahakasika ny fifehezana ny tahirina lalam-pihariana drakaka sy ny orita sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fomba fiainan’izy ireo sy ny teknika fiompiana hanaraka ny toetr’andro. Manankarena i Madagasikara ary midadasika ny ranomasina ka rariny raha jerena akaiky daholo amin’izay ireo harena anaty rano mba tena ho lovain-jafy fa tsy ny vahiny na ireo olom-bitsy hatrany no hahazo tombony.